Ny birao Linux tsara indrindra: Jona 2014 - Vokatra | Avy amin'ny Linux
Miaraka amin'ny fanemorana kely dia tonga ny birao finday 10 tsara indrindra amin'ny volana mpanaraka anay Google+, Facebook y Diaspora. Tena sarotra be ny nanapa-kevitra satria nandefa sary babo tsara izahay. Na izany aza, ny santionany tena tsara dia tavela tamin'ny lisitra farany noho ny tsy fampidirany ireo antsipirihany ilaina (rafitra, tontolo iainana, lohahevitra, sary masina, sns.). Aza adino ny mampiditra azy ireo amin'ny volana ambony ary tsarovy ny mampiasa tenifototra #showyourdesktoplinux rehefa mandefa ny sary nalaina.
Toy ny mahazatra dia misy karazana distros, tontolo iainana, sary masina sns. Mianatra, maka tahaka ary mankafy! Ho ao anaty lisitra ve ny anao?
1 1. Jimmy Pulido
4 4. Santiago Buendía
5 5. Jesoa Benjamin Yam Aguilar
8 8. Fernando Diaz
10 10. Jesoa Benjamin Yam Aguilar
11 Yapa: Ugo Yak
1. Jimmy Pulido
Lohahevitra Qtqurve: Hex
Lohahevitra Plasma-KDE: Kaledonia
Sariitatra: Numix-circle + flattr
Covergloobus: lohahevitra novatnews
GTK Zoncolor Green Theme
Lohahevitra Openbox: Green Prelude
Sary masina: Clarity-viridis
Lohahevitra Conky: Phoenix Coyotes
Rakotra lohahevitra Gloobus: eOS
4. Santiago Buendía
5. Jesoa Benjamin Yam Aguilar
Akorandriaka gnome 3.4.2
Linux Deepin lohahevitra.
ConkyManager lohahevitra 4 & 2 Core Blue
Sariitatra: Taratra toradroa
Tontolo iainana: Xfce
Conky: vaovao V2
Tontolo iainana: Gnome Shell
Lohahevitra Gtk +: maizina fototra
Kisary: ​​faribolana numix
Lohahevitra = Numix-Archblue
Sary masina = Numix-Square
Conky = Conky Ankehitriny, miaraka amin'ny zavatra vitsivitsy nampiana.
tint2 = ny kopian'ny manjaro-openbox
AVY AMIN'NY: KDE
Plasmoids: XBar PlayBar, Touch pad, Desktop Pager, Show Folder.
Dock: tsy misy dock toy ny cairo plank docky sns, fa ao amin'ny KDE dia ataonao amin'ny panel KDE.
10. Jesoa Benjamin Yam Aguilar
Tononkira Tokyo novaina tamin'ny gimp
Yapa: Ugo Yak
Rafitra miasa: Manjaro Linux (XFCE)
Lohahevitra momba ny tontolo iainana XFCE: SimpleX-Blue
Lohahevitry ny kisary: ​​Nitrux
Lohahevitra CoverGloobus: tsotra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny birao Linux tsara indrindra: Jona 2014 - Vokatra
Miarahaba anao aho, REHETRA REHETRA !!! Izy io dia famoronana sy fomba tsara hanehoana fa ny fananana fizarana mifototra amin'ny GNU / Linux dia toy ny tanimanga eny an-tananao, mamolavola azy araka izay itiavanao azy.
Izay hatsarana !!!!! Ny iray tsara kokoa noho ny iray hafa !!!!. Tsy azo atao ny misafidy iray. Miarahaba antsika rehetra.
Elm Axayacatl dia hoy izy:
Tsara be daholo 😉
Valiny tamin'i Olmo Axayacatl
juanuni dia hoy izy:
Ny isa 2 hatreto ... fanamarihana manokana ho an'ny yapa
Mamaly an'i juanuni
Tomas Del Valle dia hoy izy:
Valiny tamin'i Tomás Del Valle
fzeta dia hoy izy:
Ny fizarana Gnu / Linux dia tsy rafitra miasa. (ARY)
Mamaly an'i fzeta
Marina izany, fa aleo tsy ho tsara tarehy loatra, che! 🙂
Fernando Diaz dia hoy izy:
Misafotofoto tamin'ny terminology XD
Valiny tamin'i Fernando Díaz
Victor osorio dia hoy izy:
Raiki-pitia tamin'ilay birao voalohany aho dia ArchLinux tsara tarehy <3 Tiako be izany ka efa manomboka mametraka ArchLinux amin'ny PC-nao aho ... tokony hanao lesona momba ny fomba hamelana azy ho toy ny birao No.
Valiny tamin'i Victor Osorio
Ahh, carmba, fitsiriritana inona. Nefa jereo izay azo atao amin'ny Linux. Gaga aho fa nanjakazaka tamin'io laharana io ny Arch.
Tsara daholo; Fa mety hisy fomba hahazoana ny sarin-tsarin'i Jorge Dangelo?
PS: endri-tsoratra tsara tarehy, izay ampiasain'izy ireo ho fanehoan-kevitra, lol tsy azoko izany
Jorgedangelo dia hoy izy:
Eto no anananao 🙂
Mamaly an'i jorgedangelo
Misaotra Jorgedangelo, birao tsara tarehy anananao 😉
illukki dia hoy izy:
Tsara daholo izy ireo fa tiako ny n ° 2. bebe kokoa !!! mahafaly
Mamaly an'i illukki
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra. mahafaly
Tena tsara daholo, fa ny tiako indrindra dia 1, 2 ary 4
Felix dia hoy izy:
Mbola tsy azoko ny fomba filazan'ny mpankafy Mac OSX jamba fa ny rafitr'izy ireo no tsara tarehy indrindra. Ary sokajin'izy ireo ho ratsy tarehy foana ny Linux.
Miarahaba ireo izay nanamboatra manokana ny latabany toa izao. Mahafinaritra ery.
Manontany tena aho sao misy fampiharana ahafahako manome sentra mahafinaritra amin'ny lxde?
Santiago Buendia dia hoy izy:
Andramo ny dock ao Kairo, mpitantana Conky ary Compiz.
Valiny tamin'i Santiago Buendía
Fermin Alberto dia hoy izy:
Salama Santiago, miarahaba anao, ny latabatrao no tiako indrindra. Azonao zaraina ve ireo toerana Conky ampiasainao sy ny sary an-tsary?
Valiny tamin'i Fermín Alberto
Ny distro-ko dia Lubuntu, saika ny fitaovana rehetra dia miasa tsara amin'ny LXDE. Vao haingana aho no nanao andrana tamin'i Compton mba hanome vokatra tsara ho an'ny varavarankely (aloka, mangarahara, tetezamita, sns.) Mitarika ahy amin'ity fampianarana ity:
[fanamaivanana] Ankehitriny tsy maintsy apetraka #hashtag ankoatry ny fepetra voafaritra? Midika izany fa mamono tena aho amin'ny famolavolana ny PC, miova avy amin'i Debian Wheezy mankany Jessie ary mametraka ny birao XFCE arak'izay azo atao ary mamoaka azy amin'ny G + ao anatin'ny °> vondrona Linux, ka tsy tafiditra ao ihany? [/ fanampiana]
Matotra tokoa, ny birao dia tena tsara, ary izy ireo dia tsara mololo.
Raha sanatria, tsy maintsy mandefa pikantsary mankany amin'ny fanpage G + tafiditra ao amin'ity tranonkala ity ve ianao? Satria manana vondrona hafa mifandraika amin'ny bilaogy aho ary nampakatra [url = http: //foro.desdelinux.net/viewtopic.php? Pid = 21090 # p21090] tao amin'ny forum [/ url] ny pikasike tamin'ity volana ity (raha ny pikantsary izay navoaka tao amin'ny forum…).
Ary teny an-dalana, ao amin'ny G +, azoko ity:
Miala tsiny, efa nahavita nandefa ny pikantsariko ho any G + aho (tsy azo idirana amin'ny Opera Mini).
santiago alessio dia hoy izy:
Ahoana no andefasako ny ahy?
Mamaly an'i santiago alessio
Eto ianao manana ny ahy 😀:
Eto ianao manana ny ahy: D ..
Momba an'i Fedora miaraka amin'i Gnome-Shell.
Lohahevitra Gnome-Shell: voadio
Lohahevitra Windows: Numix
Lohahevitra GTK: Numix
Izaho dia efa nametraka ArchLinux ary tonga lafatra ny zava-drehetra, raha tena mankaleo amin'ny raharaha Pulseaudio sy ireo zavatra ireo, na izany aza XD…. ny fanontaniana dia hoe, ahoana no hametrahako ny birao kde Arch ho toy ny birao No. 1? Azafady azafady misy manampy ahy hametraka azy toy izao, mety ho fanampiana lehibe fa vaovao amin'ny KDE aho ary koa ArchLinux ka fanampiana kely dia mety ho ahy 😀
jereo amin'ity tranonkala ity ihany fa misy lahatsoratra maromaro momba io lohahevitra io
Tsy te ho vazivazy ratsy aho, fa raha tsy hampiasa ny birao fotsiny i Archlinux, dia antsasaky ny fart ilay izy ... xD, indrindra satria izy dia ny KDE, ary ny KDE dia azo ovaina amin'ny distro rehetra, raha ny tena izy ny desktop 1 dia tena mitovy amin'ny fomba nahatongavan'i Chakra Linux ho toerana misy anao
Ao amin'ny sary dia misy ny masontsivana rehetra momba ny Desktop-ko, mazava ho azy fa raha manana olana ianao dia lazao amiko. Faly aho fa tianao izany.
voalohany indrindra miarahaba anao !!!!, manaitra ny biraonao,
Ahoana no ahafahako mampifangaro ireo fonosana roa?
tsy misy olona dia hoy izy:
Jorge Dangelo no tsara indrindra ary ity 7 jaa ity
coredie dia hoy izy:
Tiako daholo izy ireo fa misy mahalala tutorial hahay handanjalanja ny birao ka tiako ilay nampiseho ny birao crunchbang anao raha misy mahay manamboatra azy io ka lazao ahy ny fisaorana anao =)
Mamaly an'i coredie
Ocelan dia hoy izy:
Wow !!! ny 2 efa nanapoaka ahy, tokony misy tutorial momba ny fomba hamelana azy toy izao 🙂
Valiny tamin'i Ocelan
Misaotra noho ny hevitrao !! Noho ny fahateren'ny fotoana dia mila fotoana kely aho hanoratako tutorial, na izany aza, eo am-panompoana anao aho hanohana anao araka izay tratra mba hahafahanao mankafy an'io traikefa ahafahanao manamboatra ny birao io.
Oscar Marquez dia hoy izy:
Toa tsara ny biraon'ny Linux, ahoana raha manadala ahy izy dia sarotra ny mametraka rohy, farafaharatsiny ao amin'ny Ubuntu 14.04 miaraka amin'ny Unity 7
Valiny tamin'i Oscar Marquez
Ny birao UI Maoderina dia toa tsara toa ny Windows 8.1 amin'ny Linux: 3
Ny latabatra tsara indrindra dia ilay noforonin'ny tsirairay sy nampiasainy araka izay tiany. Tsy azo atao ny milaza na mihevitra fa ireo birao ireo no tsara indrindra, sa tsy izany, ny tsara indrindra satria ???? Tena tsy miombon-kevitra. Saingy tsy holaviko fa tsara tarehy izy ireo.
ny faha-2, tsara.
ary ny faha-6, bakan.
Ny 1 sy 7 no tsara indrindra. Ny ambiny, tsy taitra aho. Ary ny 9 dia mandray ny loka ho an'ny mahatsiravina indrindra, fomba iray mankamin'ny KaOS ratsy tarehy.
Ny 2 tsy isalasalana fa ny tsara indrindra, ny hany zavatra tsy tiako dia ilay kisary eo amin'ny dock izay tsy mifanandrify amin'ny hafa.
Aztk dia hoy izy:
Mahafinaritra ery. Ireo fanaparitahana sy tontolo iainana samihafa izay ao amin'ny Linux dia azo volavolaina ... mihoatra ny Windows. Afaka manao resaka distro momba anao ianao. Miarahaba antsika rehetra manana birao tsara tarehy toy izany.
Mamaly an'i Aztk
bdov dia hoy izy:
Ny sehatr'asan'i Jimmy Pulido # 1 dia ny PEPA, ny zavatra ratsy momba ny KDE izay mandany loharanom-pahalalana marobe amin'ny PC efa tranainy sy tsy dia misy firy. Te-hiteny aho fa haorina amin'ny LXDE na XFCE ny birao, satria birao kely izy ireo ary tsy mandany loharanon-karena.
Mamaly an'i bdov
Yio643 dia hoy izy:
Olona afaka mandalo ahy ny sary an-tsary ny voalohany
Mamaly an'i Yio643
Iray ihany ny boaty sisa tavela handatsa-bato hahita izay mandresy
Mamaly amin'ny matoatoa